Nafana tanteraka ny AFT: nahatafita hafatra ny « Vazo miteny » | NewsMada
Nafana tanteraka ny AFT: nahatafita hafatra ny « Vazo miteny »
Raha ho an’ny kolontsaina, niavaka iny faran’ny herinandro nivalona iny. Efa ela niandrasana ny mpankafy vazo miteny ka nanao izay nahafa-po azy niaraka amin’ireo mpanakanto mpiangaly izany, tetsy amin’ny AFT Andavamamba.
Tafiditra ao anatin’ny andiany faharoa ny seho « Vazo miteny » nahitana an’i Tselonina, ny tarika Filah, i Belahy, ary Ifanihy. Nafana tanteraka ny efitrano malalaky ny Alliance française Antananarivo eny Andavamamba ny faran’ny herinandro teo. Tsikaritra fa samy nahatafita hafatra izy ireo. Manamarina izany, tamin-kafanam-po sy saina nandinika no nandraisan’ny mpijery tonga maro teny an-toerana ireo hira rehetra niainga avy eny an-tsehatra. Tazana tsara teny amin’ny endrika sy ny fihetsiky ny mpijery tsirairay fa toa iainany mihitsy miaraka amin’ilay mpanakanto ny zava-boalazan’ny tononkira.
Anisan’ny tsapa ihany koa fa tia vazo miteny ny Malagasy. Mbola ao anatiny ny fitiavana mihaino tononkira. Omeny lanja sy hasina ilay tolotra avy eny an-tsehatra sy ireo mpanakanto nampita izany hany ka nifamatotra tanteraka ilay fientanam-po eo amin’ny roa tonta (mpanakanto sy mpijery). Efa maro sahady ireo miandrandra ny andiany fahatelo amin’ny « Vazo miteny »!